यसरी बनाउनुस, दाम्पत्य जीवन खुशी र सुखमय – Halkhabar kura
२ चैत्र २०७६, आईतवार १०:५७
यसरी बनाउनुस, दाम्पत्य जीवन खुशी र सुखमय
एजेन्सी । विवाहपश्चात् हर सुखदुख एकअर्कासँग साट्न सजिलो होओस् भनेर पनि यो सम्बन्धलाई सामाजिक मान्यता दिइएको हो । अनि एक अर्काप्रति सम्मान र माया पनि । तर तर हिजो आज कतिपय सम्बन्धहरु बीचमै टुट्ने र तोडिने पनि भइरहेको छ ।
एक अर्काबीच बैचारिक द्वन्द्व बढेको छ । पारिवारिक बेमेलको अवस्था छ । त्यसैले दाम्पत्य जीवनमा खटपट र उतारचढाव आइरहेको छ । एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने आधार टुटिरहेको छ । सानोतिनो समस्याले पनि सम्बन्ध नै समाप्त भइरहेको छ । आखिर कारण के हो त ? यसबारे हामीले टिप्स तयार पारेका छौँ ।
श्रीमतीको यी बानी जुन श्रीमानलाई थोरै नि मन पर्दैन : अरुको प्रशंसा श्रीमानसँग अरु केटी वा आफ्नो साथीको श्रीमतीको प्रशंसा गर्दा श्रीमती रिसाउँछिन् भने तपाईको यो बानी लाई पटक्कै मन पर्दैन ।
यौन सम्बन्धलाई हतियार बनाउनु : कतिपय महिलाहरु यस्ता हुन्छन् आफूलाई श्रीमानसँग रिस उठेको छ भने शारीरिक सम्बन्धलाई हतियार बनाउँछन् । श्रीमतीको यस्तो बानी जुन श्रीमानलाई पटक्कै मन पर्दैन ।
घुमाउरो कुरा गर्ने : आफ्नो श्रीमती अर्थात् जीवनसाथीले घुमाएर कुरा गर्छन भने पुरुषहरुलाई मनै पर्दैन । उनीहरु जिम्मेवारीको बोझ र तनावमा हुन्छन् । र उनीहरु सिधा कुरा गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् ।
व्यक्तिगत कुरामा घोचपेच : व्यक्तिगत कुराहरुलाई घोचपेच गर्ने श्रीमतीको बानी पनि पुरुषहरु पटक्कै मन पराउँदैनन् । आफ्नो परिवारको कुरालाई लिएर झटारो हानिरहने तपाईको बानी छ, भने तपाईको जीवनसाथीलाई पटक्कै मन पर्दैन ।
लगातार बोलिरहने : धेरै महिलाहरुको बानी हुन्छ बोलिरहने । आवश्यक कुरा मात्र नभएर अनावश्यक कुरामा पनि कचकच गरिरहने । तर पुरुषहरु ठिक्क अर्थात् चाहिने कुरा मात्र बोलोस् भन्ने चाहन्छन् ।
सपिङको लत : कतिपय युवती अर्थात् महिलाहरुको बानी हुन्छ कि जे देख्यो त्यहि किनिहाल्नु पर्ने । अर्काले लगाएको देख्यो कि किनिहाल्नु पर्ने । श्रीमानसँग पैसा छ कि छैन मतलब नै नगर्ने । तर पुरुषहरु यो मन पराउँदैनन् । शंका गर्ने बानी : कोहिसँग बोलेको देख्यो कि शंका गर्ने श्रीमतीको बानी छ, भने पनि पुरुषहरु पटक्कै मन पराउँदैनन् । कुरा नबुझी शंका गर्ने श्रीमतीको बानी छ भने उनीहरु सहन सक्दैनन् ।
श्रीमतीलाई मन नपर्ने श्रीमानका यस्ता बानीहरु :
अरु केटीसँग तुलना : कोहि पनि केटि अर्थात् युवतीहरु पटक्कै मन पराउँदैनन्, आफूलाई अरुसँग दाँजेको । तर पुरुषहरुको बानी हुन्छ कि आफ्नो श्रीमतीलाई अरुसंग दाँज्ने । श्रीमतीको साथीबारे चासो राख्नु : श्रीमानले अरुको बारेमा या आफ्नै मिल्ने साथीको बारेमा चासो राखेको कुनै पनि महिलाले मन पराउँदिनन् ।
आफ्नो साथीको सकारात्मक या नकारात्मक कुनै पनि कुरामा चासो राखेको उनिहरु मन पराउँदैनन् । शंका गर्ने बानी : कतिपय पुरुषहरुको धेरै शंका गर्ने बानी हुन्छ । उनीहरु कुरै नबुझी श्रीमतीमाथि शंका गर्छन् । अरुको कुरा सुनेकै भरमा गालीगलौज गर्छन् । तर श्रीमतीलाई यस्तो बानी पटक्कै मन पर्दैन । जसले सम्बन्धमा नै खटपट पनि ल्याउँन सक्छ ।
पूर्वप्रेमीको बारेमा सोधखोज गर्नु : पुरुषहरुको अर्थात् श्रीमानको बानी हुन्छ आफ्नो पार्टनरको पूर्वप्रेमीबारे चाँसो राख्ने, सोधीखोजी गर्ने तर श्रीमतीलाई उनीहरुको यो बानी मन पर्दैन । युवतीहरु बितेका कुरा कोट्याउन चाहँदैनन् ।
लोभ गर्ने बानी भएका पुरुषहरुलाई युवतीहरु मन पराउँदैनन् । सरसफाई : महिलाको तुलनामा पुरुषहरु सरसफाईमा कमै ध्यान दिन्छन् । समय समयमा सेभिङ गर्ने, कपाल काट्ने, नुहाउने, नङ काट्ने बानी नभएका पुरुषलाई युवतीले मन पराउँदैनन् ।
Previous विदेशबाट आउने सबैलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ अनिवार्य बस्नुपर्ने, आजदेखि लागु हुने
Next सुन्दर देखिइरहनको लागि प्रयोग गर्नुहोस घ्युकुमारी
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार २०:२८
मुल्‍य वृद्धिविरुद्ध खाली सिलिन्डर राखेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार १७:३१
धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङले लिए शपथ
९ जेष्ठ २०७९, सोमबार १५:५३
पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण चुनाव हारियो, बृहत् समीक्षा गर्नुपर्छ : ओली
धरान र धनगढीका स्वतन्त्र उम्मेदवारले गरेको पहिलो निर्णयले नै देशभर तरंग, कुर्सीमा बसे लगत्तै देखाए यस्तो छनक !
भरतपुरमा झन् कमजोर देखियो एमाले
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १९:४३
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १९:४१
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १९:३०
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १९:२७